Muuqaalo Luuqado Badan Kuhadlaya COVID-19 Fiidyowyada Macluumaadka - AfricArXiv
Waxaa jira macluumaad fara badan oo wareegaya COVID-19 - qaar ka aamin badan kuwa kale. Shaqsiyaad badan, waa walaac in lagu xalliyo farriimaha kala duwan - badiyaa luqadaha aan ahayn afkooda hooyo.
Waxaan soo jeedinay inaan wax uga qabano tan iyada oo la adeegsanayo farriimo gaagaaban oo gaagaaban oo lagu bixiyo luqado badan oo gobol / maxalli ah intii suurtagal ah. Sidaas awgeed, waxaan u baahan nahay caawimaad baarayaal cilmi-baarayaal iyo xiriiriyayaal kale.
Waxaan hiigsaneynaa inaan abuurno fiidyowyo 2-daqiiqo ah oo luqado badan ah intii suurtagal ah oo soo bandhiga farriin joogto ah oo ku saabsan COVID-19, istiraatiijiyadaha xakameynta iyo macluumaadka caafimaadka ee la taaban karo.
Sepedi [Koonfur Afrika]
Waxaan rabaa inaan ku dhiiri geliyo qof kasto oo u ololeeya wadaniga ah inuu sameeyo CVID 19 macluumaad noocaas ah iyo fiidiyowyo wacyigalin ama cod ah oo duubista si loogu wargaliyo dadkooda wixii ku saabsan aafada. Hambalyo Jonathan Sena iyo asxaabtiina dadaalkan ay ugu wargalinayaan dadka reer Maasai.
Posted by IPACC - Guddiga Isuduwaha Dadka Asaliga ah ee Afrika Jimcaha, Abriil 24, 2020
Liiska Ciyaarta Gbagyi, Yoruba, Igbo, Efik, Urhobo, Hausa & Sign Language [Nayjeeriya]
Sidee wax ku biirineysaa?
Hoos ka daawo qodobbada laga wada hadlay
U turjun luqaddaada maxalliga ah
Ku dar salaanta, caddayn wanaagsan, dammaanad in ficil shaqsiyeed isbadal keeni karo
Filim iskaa soo bandhigaya fariintan. Ujeeddo illaa 3 daqiiqo (cabirka faylka> 600MB)
Ku calaamadee fiidiyaha qaabkan soosocda: COVID_Hordhac_LANGUAGE_COUNTRY_dd-mm-2020
U soo dir fiidiyowgaaga YouTube-ka oo buuxi Foomka Google: https://tinyurl.com/COVID19-video-submission.
Anaga oo adeegsaneyna macluumaadka ka yimid Foomka Google waxaan ku caddeyn doonaa liistada liiska fiidiyowyada bogga Helitaanka Muuqaalka 2 ee ah https://access2perspectives.com/covid-19.
Waxaan sidoo kale soo daabici doonnaa fiidiyooyin cusub, waxaanuna saxeexi doonnaa marin marin loo adeegsado YouTube-ka channel lana wadaag Facebook. Waxaan ku galin doonaa faafinta shabakada 'Hel2Perspectives'.
Twitter: U dir fiidiyowgaaga asxaabta iyo qoyska, ku soo dir twitter-ka, la wadaag abaabulayaasha bulshada (kaniisadaha, iskuulada, shabakadaha bulshada). Fadlan noogu tag at @AfricArXiv oo isticmaal haashtaha # COVID19video
Wixii dhibaatooyin ah, su'aalo ama walaac ah, emayl: info@access2perspectives.com
Waxaan rabnaa inaan hubino in fiidiyowyada sida ugu ballaaran loo wadaago. Waxaan xad u sameyneynin faafinta fiidiyowyada. Si loo hubiyo anshax mas'uul ah waxaan u soo jeedineynaa in wadaaga oo dhan lagu xukumayo ruqsad loo yaqaan 'Creative Commons cc-shatiga'https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
Isbarbardhig - halkee ka timid, maxaad ka qabtaa?
Salaan, magacaygu waa… ka socda (magaalada, waddanka)
Coronaviruses waa koox fayrasyo ​​la xiriira oo sababa cudurada neef-mareenka ee aadanaha.
Cudurrada badankood ee ay keento coronaviruses waa kuwo sahlan laakiin way ka sii darnaan karaan.
Dhawaan xanuun cusub oo uu keenay coronavirus, COVID-19, ayaa la aqoonsaday oo si dhakhso ah ugu faafay adduunka oo dhan.
COVID-19 waa cudur dhawaanta la aqoonsaday oo sababa SARS-CoV-2 coronavirus.
Waxaa markii ugu horreysay lagu arkay bukaannada dabayaaqadii 2019 magaalada Wuhan ee gobolka Hubei ee bartamaha Shiinaha.
Dhibaatada noocan ah ee loo yaqaan 'coronavirus' waxay si fudud ugu gudbisaa dadka dhexdooda si dhakhso ah ayaana u faafay.
COVID-19 ayaa hadda laga soo sheegay in ka badan 150 waddan oo adduunka ah oo ay wehliyaan Shiinaha, Talyaaniga, Mareykanka, Isbaanishka iyo Jarmalka oo hadda si xun saameyn ugu yeeshay.
Ururka Caafimaadka Adduunku (WHO) wuxuu ku dhawaaqay cudurka 'coronavirus' ee 2019-20 inuu ku faafayo bartamihii bishii Maarso 2020.
Maxay yihiin astaamaha?
Calaamadaha ugu caansan ee COVID-19 waa qandho, daal, iyo qufac qalalan.
Astaamaha ayaa badanaa ah mid sahlan oo bilaw tartiib tartiib ah, oo soconaya illaa laba toddobaad.
Dadka badankood waxay ka bogsadaan cudurka iyagoon u baahnayn daaweyn gaar ah.
Calaamadaha aadka u daran ee cudurka waxaa ka mid ah neefsashada oo dhib noqota, laab laabasho adag, jahwareer iyo bushimaha buluuga ah ama wejiga.
Kooxo gaar ah oo dad ah ayaa halis ugu jira cudur daran, oo ay ku jiraan, dadka da'da ah, iyo kuwa qaba xaalado caafimaad oo horey u jiray oo ay ku jiraan dhiig karka, dhibaatooyinka wadnaha ama sokorowga.
Ma qaadsiin kartaa dadka kale haddii aad isku aragto astaamaha cudurka 'coronavirus'?
Dadka qaarkood waxay yeeshaan astaamo aad u khafiif ah lagamana yaabo inay isu tixgeliyaan inay xanuunsan yihiin.
Si kastaba ha noqotee, dadka goor hore ku dhaca cudurka oo leh astaamo aad u fudud ayaa la ogaaday inay leeyihiin heerar sare oo fayras ah oo ay ku dhici karaan dadka kale.
Isla marka ay calaamaduhu soo baxaan, waxaa muhiim ah in la bilaabo yareynta xiriirada bulshada iyo 'is-go'do' si loo yareeyo halista faafitaanka fayraska.
Caddaynta ayaa soo jeedisay in cudurka khafiifka ah, oo leh astaamo yar, uu ku badan yahay carruurta. Xaaladaha dadka waaweyn ee gudbinaya COVID-19 iyada oo aan la arkin wax astaamo ah oo cudurka ah ayaa sidoo kale la soo sheegay, in kasta oo aan caddayn sida ay caadi u tahay tan.
Maxaad sameyneysaa si aad amaan u ahaato?
Si aad naftaada u ilaaliso, waxaa muhiim ah inaad gacmahaaga ku dhaqdo saabuun iyo biyo si joogto ah oo joogto ah, gaar ahaan ka dib markaad bannaanka u baxdo.
Jelka khamriga sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa bedel ahaan.
Waxaa kale oo muhiim ah inaad ka fogaato taabashada indhahaaga, sankaaga, iyo afkaaga gacmo dhaqdaan.
Haddii COVID-19 uu ku faafo bulshadaada, waxaa sidoo kale muhiim ah inaad waxoogaa fogaan u dhexeyso naftaada iyo xubnaha kale ee bulshada.
Ka ilaali dadka kale haddii aad leedahay astaamo
Ka dib markii uu fayrasku taabto ka dib, astaamaha ayaa laga yaabaa inay muuqdaan illaa 14 maalmood ka dib.
Haddii aad u maleynaysid inaad la kulantay qof fayraska qaba ama aad bilowdo calaamadaha cudurka, waxaa muhiim ah inaad 'is-go'do' muddo 14 maalmood ah si aad uga fogaato inuu fayrasku ku faafo.
Guriga joog haddii aad jiran tahay ama xubno kale oo reerka ka mid ah aad jirrado.
Weydii qoyska, saaxiibbada ama deriska haddii ay kuu awoodsiin karaan inay kaa tuuraan cuntada oo ay ka fogaadaan gaadiidka dadweynaha.
Haddii ay tahay inaad ka tagto guriga, waa inaad xirataa waji, oo iska hubi inaad afkaaga iyo sankaaga ku daboosho masar markii aad qufacayso ama hindhiseyso.
Gobollo badan oo uu saameeyay fayrasku, 'jeedinta bulshada' waxaa looga baahan yahay in laga hortago faafitaanka fayraska.
Waa maxay fogeynta bulshada?
Gobollada ay sida xun u saameeyeen, dadka waxaa la weydiisanayaa inay fuliyaan tillaabooyinka 'jeedinta bulshada'.
Tan waxaa ku jira yareynta tirada xiriirada dadku leeyihiin maalinta oo dhan si loo yareeyo tirada gudbinta.
Dad badan ayaa lagu dhiirigelinayaa inay ka shaqeeyaan guriga oo ay ka fogaadaan gaadiidka dadweynaha haddii ay suurtagal tahay.
Kulannada asxaabta iyo qoyska (oo ay ku jiraan aroosyada iyo kirismasyada) waa la niyad jabinayaa.
Dadka loo arko inay halis ugu jiraan infekshin daran waxaa laga codsanayaa inay raacaan qawaaniin adag marka loo eego xubnaha kale ee bulshada.
Waa muhiim waqtigaan in laga fekero dadka nugul ee bulshada isla markaana la fiiriyo qof walba caafimadiisa dhimirka.
Bulshooyinka ayaa abaabulayay kooxo xiriir ah, taasoo la macno ah in dadku ay weydiisan karaan caawimaad deriskooda haddii loo baahdo.
Haddii lagaa doonayo inaad guriga joogto, waxaa muhiim ah inaad jimicsi sameyso, caafimaadka wax u cunno oo aad firfircooni ku dhaqaaqdo.
Qoysas badan iyo asxaabtooda ayaa la xiriiraya iyagoo adeegsanaya tikniyoolajiyadda fog sida taleefannada, internetka, iyo warbaahinta bulshada.
Waa maxay sababta fogeynta bulshada iyo koontaroolada safarka ay dowladaha u fulinayaan?
Siyaasadahan waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo tirada dadka ee is dhexgalka, taas oo adkeyneysa in fayrasku ku faafo bulshada.
Marka tan la sameeyo, waxaa la rajeynayaa in isbitaalada iyo tas-hiilaadka caafimaad ee gobollada ay dhibaatadu saameysey ayan noqon doonin kuwo culeys badan, oo bixin kara daaweyn xaalado badan intii suurtagal ah.
Sidaa darteed dowlado badan ayaa mamnuucaya isu imaatinka waaweyn, sida riwaayadaha iyo munaasabadaha cayaaraha.
Meelaha kale ee soo jiidata dadka badan, sida dukaamada aan muhiimka ahayn, jimicsiyada iyo makhaayadaha ayaa sidoo kale laga codsan karaa inay xiraan.
Iskuulada iyo Jaamacadaha sidoo kale laga yaabaa inay xirnaadaan sidoo kale.
Wadamo badan ayaa sidoo kale soo rogaya xayiraad dhanka safarka ah, kuwaas oo xaddidaya cidda soo gali karta kana tagi karta waddammada.
Meel tixraac ah si aad u hesho tilmaamaha dalka u gaarka ah
Maxaan filan karnaa bilaha soo socda?
Kani waa cudur cusub, kaas oo aan wali wax badan ka baranno.
In kasta oo wadamada qaarkood faafitaanka cudurka u muuqdo mid gaabinaya, dalal kale oo badan waxaan ku aragnaa wax kasoo horjeedda.
Waa xaalad si dhakhso ah isu beddeleysa, waana muhiim in dadku ay la socdaan cusbooneysiinta hagida ee dowladooda.
Kheyraadka WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Xarumaha Xakamaynta iyo Ka Hortagga Cudurrada. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov
AfricArXiv COVID-19 Su'aalo iyo Jawaab oo ku saabsan afafka Afrikaanka ee gobolka: https://info.africarxiv.org/qa-around-covid-19-in-regional-african-languages/
Qoraalka waxaa bixiyay
Anna McNaughton, Jaamacadda Oxford, ORCID iD: 0000-0002-7436-8727, Twitter: @AnnaLMcNaughton
Louise Bezuidenhout, Jaamacadda Oxford, ORCID iD: 0000-0003-4328-3963, Twitter: @loubezuidenhout
Johanna Havemann, Helitaanka2 Aragtida, ORCID iD: 0000-0002-6157-1494, Twitter: @johave
Qoraalkan iyo dhamaan fiidiyowyada hoosta ayey ka jiraan Shatiga CC-BY-SA 4.0
U yeer sida: Bezuidenhout, Louise, McNaughton, Anna, & Havemann, Johanna. (2020, Maarso 26). Muuqaalo Luuqado Badan Kuhadlaya COVID-19 Fiidyowyo Macluumaad Ah. Zenodo. doi.org/10.5281/zenodo.3727534